Ubafundisa njani abantwana ukubhala isihobe | Oomama Namhlanje
UToñy Torres | | ekufundeni
Ukufundisa abantwana ukubhala umbongo yindlela elungileyo yokubanceda babonakalise iimvakalelo zabo, kunye nokuba ngowokuqala ukudibana noncwadi kunye nendlela elungileyo yokwandisa isigama sabo. Imibongo ifundwa ngokufutshane, kunye iyahlekisa kuba inesingqi esitshintshayo kwaye nokuba mnandi ngakumbi, iba nomtsalane ngakumbi kwabancinci. Ukufumanisa isihobe linyathelo elikhulu kubantwana.
Ukongeza ekubancedeni baphucule ukufunda kwabo, ukufunda ukubhala isihobe kuya kuphucula ubuchule babo kunye nengcinga. Njengoko ubona, ukuba abantwana bafunde isihobe zonke izibonelelo, ke, ukuba ufuna ukufundisa abantwana ukubhala imibongo, ungaphoswa ziingcebiso esikushiya apha ngezantsi.
1 Amaqhinga okufundisa imibongo
2 Funda ngokudlala
Amaqhinga okufundisa imibongo
Imibongo ingaphezulu kokuthandana, yimvano-siphelo, imnandi, ibethi kunye nokutshintsha kwesingqi, ngamafutshane, kukuqhushumba kobuqili obufutshane. Nangona ezi ndinyana kunganyanzelekanga ukuba zibe nemvano-siphelo, kusekho Umtsalane ngakumbi ebantwaneni ngenxa yokuba kumnandi kangakanani ukulinganisa. Le yinto yokuqala ekufuneka uyisebenzisile ukufundisa abantwana ukubhala imibongo.
Ngaphandle kokufundisa isicengcelezo, ungasebenzisa la maqhinga:
Guqula umbongo: Lo ngumsebenzi okhawulezayo nolonwabo wabantwana ukuba bafunde ukubhala imibongo. Kuya kufuneka ukhethe isingqisho esincinci, esifutshane kwaye kulula ukusiguqula. Abantwana kufuneka bakhangele Amagama anokutshintsha ivesi yantlandlolo.
Izithethantonye nezichasiEli lixesha elihle lokwazisa izithethantonye nezichasi, ukuba awuzazi. La magama asetyenziselwa ukwenza izicengcelezo ezimnandi, apho abantwana baya kuba nexesha elimnandi.
Yenza uluhlu lwamagama anemvano-siphelo. Ngaloo ndlela uzobanceda kwasekuqaleniKuya kufuneka benze izivakalisi ngamagama asele benawo. Kancinci kancinci baya kufumana ubumnandi bokuyila kunye nokwenza iivesi, kwaye baya kufunda kwaye badibanise amagama amatsha ngokwabo.
Sebenzisa amaqhina nezicengcelezo zabantwana abancinci. Iimfumba ziqulethe izicengcelezo, iimfihlelo ezifihliweyo zokuba abantwana bafumane, kwaye zilungile kwimvakwemini yosapho eyonwabisayo. Kule khonkco uya kuyifumana Iintsontelo ezili-15 ezilula zabantwana, iluncedo kakhulu ekufundiseni abantwana ukubhala imibongo.
Funda isicengcelezo. Amagama amaninzi anemvano-siphelo kunye, kodwa asingabo bonke abanesivumelwano. Fundisa abantwana ukwenza isingqisho amagama alingana kakuhle, anengqiqo. Lo ngumsebenzi omkhulu wokugxininisa, kuba kuya kufuneka uzabalaze ukufumana amagama afanelekileyo.
Bafundise ukusebenzisa isichazi-magama. Into ephantse ingasetyenziswa ziitekhnoloji ezintsha, kodwa iluncedo kakhulu ekufundeni. Ukuba nesichazi-magama ekhaya fumanisa amagama, ucebise kwaye uhlakule ngendlela ekhethekileyo neyodwa.
Abantwana kufuneka bafunde ngokudlala, ngemisebenzi ebonwabisayo njengale siyicebisayo. Ukufunda ukubhala umbongo linyathelo lokuqala lokufunda ukubhala kakuhle, usebenzisa amagama achanekileyo, amabinzana, Iimpawu zokubhala kunye nokwandisa isigama. Ukongeza, isihobe yindlela egqibeleleyo yokufunda ukwakha izivakalisi ngokuchanekileyo, neziza kunceda abantwana bakhulise ulwimi lwenkobe ngandlela zonke.
Ukuze abantwana bakhuthazwe, kufuneka babone umsebenzi njengomdlalo, indlela yokonwaba kunye nokuchitha ixesha ekhaya. Bhiyozela ibinzana ngalinye kunye nabo, hleka xa beza nezicengcelezo ezihlekisayo, kwaye ubonwabise xa bekhathazekile kuba ingasebenzi. Ayisosifundo, ayisiyonto ekufuneka beze nayo esikolweni. Imalunga ne umdlalo ongezelelweyo ukonwaba, ulungile nasekufundeni yabantwana
Ungabafundisa nokufunda imibongo, kuba yindlela elungileyo yokufunda ukufunda izivakalisi, ukuchonga iziphumlisi, kunye nokuchazwa ngokuchanekileyo kwamaxesha onke. Thatha uvavanyo kwaye uya kothuka, mhlawumbi unembongi encinci esakhasayo ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » ekufundeni » Ubafundisa njani abantwana ukubhala isihobe
Abantwana bam abadala abathethi